Ulwazi lwangaphantsi: izixhobo ezisetyenziswa rhoqo kwimpahla yangaphantsi
Ixesha Post: Sep-19-2020
Impahla yangaphantsi, kubandakanya iibrasi, iivesti, iiphenti, iihempe zangaphantsi, izikipa, iihempe zenkcubeko, iihempe, iijezi zomqhaphu, njl., Zizimpahla ezidibana ngqo nolusu lomntu. Zinxulumene nempilo yakho. Ke ngoko, kuya kufuneka unike ingqalelo ngakumbi kumgangatho we-unde ...Funda ngokugqithisileyo »
Ulwazi amalaphu ezinithiweyo
Ilaphu elukiweyo linokuthamba okuthambileyo, ukufunxa ukufuma kunye nokuphefumla, ukutyeba okugqwesileyo kunye nokwanda, kunye nemveliso yazo enxitywayo ikulungele ukunxiba, kufutshane nomzimba, ayinakho ukuqina, kwaye inokubonisa ngokupheleleyo igophe lomzimba womntu. Iimpawu zanamhlanje ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukukhethwa kwengubo yangaphantsi
Ngawaphi amalaphu awona afanelekileyo kwimpahla yangaphantsi? Leliphi ilaphu lelona lifanelekileyo kwimpahla yangaphantsi? Ilaphu langaphantsi lilolu hlobo lulandelayo: 1 100% yomqhaphu: 100% yomqhaphu unokugcina ukufudumala okuhle kunye nokufunxa kokubila. Kodwa kubantu abanokubila kakhulu, umqhaphu usenokungabi b ...Funda ngokugqithisileyo »